トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Features - ukubona indlela njengamaza ROM idla ubomi
Pa umatshini we-ROM kukuba, ixesha namandla, ngokuqhelekileyo xesha, yahlulelwe kwii ixesha ukuwa. Xa kuthelekiswa isizini eyomeleleyo kunye nexesha enomsindo, ukuze ubomi yesiqhelo ye xelela nzima. iimpawu ezithile, ezifana ixesha namandla engonwabanga-ubomi, kunzima ukuchonga kukuba kuba bubomi obuqhelekileyo. E
, iya kuba kuphela ngumzekelo enjani na izinto kwenzeka ROM iimpawu ubomi obuqhelekileyo, kodwa uya kwazisa.
kwixesha eqhelekileyo, okanye uqhankqalazo rhoqo, ukuba okanye iziyobisi kuba ngokunzulu akayi kubonwa kakhulu kunene. Ukuze athi nokuba, ngaphandle into yokuba asiyiyo oku kanye hit, izinto kuphela ndithi enamazinga enkulu ayikho. Ngokwemiqathango imveliso, njl, lufikelela kwakhona kwimveliso kwakhona liphuma ngendlela yaso.
kunjalo, isiphumo ofuna yi ingqalelo kakhulu kwimveliso nokufikelela, ezifana kuthiwa super shushu.
Kwaphuma kwindawo ezahlukeneyo ukufikelela rhoqo, akukho ngaphantsi oko akanakufane sowuyisusile imveliso Atsu kakhulu ukufikelela. Kwakhona ke, isantya ojikeleza ngaso ukuya ukubetha, waba phambi nasemva avareji 300 ujikelezo, nokuba nokuthabatha jackpot, kukho kwakhona yokuba omnye-off. Nokuba tsala-emva kwexesha ukuncitshiswa
, okanye ukuqhubekeka, kungenzeka ukwahluka kufuneka kwakhona kwenzeka ukuba oko ivaliwe lula. Loo urhulumente uya kuba luphawu ubomi yesiqhelo ROM. Ukuthetha liphuzu
, andiyi kuthabatha ngaphezulu kwe investment kwegolide, kuba ilizwe ayiqalisi ukwenza imali. Lwakuba nje waya koko, kwixesha eqhelekileyo, mhlawumbi kwakhona yokuba ngexesha stop kunzima ukuyiqonda.
nokuba kukho iimpawu ubomi obuqhelekileyo ezinjalo, kuba oko kwakuya ukuphulukana naye umsukele, kufuneka silumke. Emva koko, kule grafu data kwimeko ubomi obuqhelekileyo ezinjalo, niyazi kakuhle kwaye ubone igrafu umgca a.
line iziko stand igagasi ngaphantsi ecaleni itshathi umgca i kukuba ngaphantsi olikhoboka lotywala. Kwaye, nge-avareji, bubungqina bokuba waphinda okanye hayi phandle. Kwimeko enjalo kukho flow data, ndicinga ukuba kungenzeka ongene nexesha eliqhelekileyo inokumiselwa ukuba phezulu Wena. ubomi
Normal ayiyekeki kodwa kwakhona lula ukudlala kuba ngaphantsi, uya kufumana ithuba ufake ixesha ekuzeni emva koku. Kodwa ukuba kukho iimpawu ubomi obuqhelekileyo, 300 kwaye ukuba ukujikeleza enamazinga ngakumbi sele ilandelwe okanye, kwimeko imveliso kunye ukufikelela ayisa ziphuhliswe, ngoko kukho kungenzeka ukuba eye wangena
ixesha enomsindo, intshukumo itafile nokuba ucinga ukuba ucinga yinto elungileyo ukwenza. Ngokwahlukileyo koko, ukuba kukho ithuba lokuba abantu abeza kweli xesha eyomeleleyo, ngesiqhelo xesha. Kuxhomekeka imeko phambi kokuba otshangatshangiswayo ubomi obuqhelekileyo, andazi nokuba ingaba isebe.
ukusuka khawuzame ukubetha Nokuba ndlela, kuba ndicinga ukuba kukho imeko apho meko kugwetywa, uye ibenzakalise flow ukuzama ukubetha. Ukuba Minukere ubomi obuqhelekileyo kakuhle kakhulu, kukho kwakhona iinzuzo ukuba ukufunda kwixesha elizayo kwisiseko kwemali.
okanye babe Ngenye indlela yonke yimincili Xa engenamsebenzi okanye ingcamango, okanye abe engento ukucinga ukuba Atsu squid, emva kokuba onke, kuba oko kudla kwenziweyo deployment Magwalandini ukuba intlawulo akayi kuba ntaka ngaphandle sandisa, ndingenzi sputter kunye closeout kwaye, kufuneka silumke kuba bekungayi kubakho ixesha ukwenza ibhola ngaphandle kwezinye itafile.